VAIA300 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၃၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
မ်ာဒယ်- VAIA 300
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VAIA300
Do you want to owna300LPH VAIA300 Purified Water Filtration System produced by US technology with super smart water filtration ability, will give youasource of pure water that meets the standards of hygiene, food safety, protect your health every day.
US ရဲ့ နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး စမတ်ကျတဲ့ အရည်အသွေးရှိတဲ့ ရေစစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် VAIA300 300LPH ရေစစ်ကိရိယာက လုံခြုံစိတ်ချမှု၊ နေ့စဉ်အတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်မှုတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။
Collective image of Viet An company Viet An ကုမ္ပဏီမှ အဖွဲ့ဝင်များပုံ
With the RO water filtration line system provided by Viet An, you will no longer have to worry about the water quality that your family is using. No more worrying whether the water bottles or water cans that you buy are really purified water. Let's join with Viet An to learn about this pre-eminent water treatment and filtration system through the article below.
Viet An ရဲ့ RO ရေစစ်စနစ်ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ မိသားစုသုံးစွဲနေတဲ့ ရေရဲ့ အရည်အသွေးကို ဆက်ပြီး စိုးရိမ်နေစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ သင်ဝယ်ယူလာတဲ့ ရေဘူးတွေက အဆင့်မီရဲ့လားဆိုတာလည်း စိုးရိမ်နေစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ ရေစစ်ကိရိယာတွေကို လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ကဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုပေးပါ။
Product of RO 300, 300LPH VAIA300 Purified Water Filtration System which exported from Viet An is assembled and managed product according to the most stringent international standards of ISO 9001:2015 recently. The product has been exclusively registered trademark of VA, USApec No. 250969 and 250970 at the National Office of Intellectual Property of Vietnam.
The exported 300LPH VAIA300 Purified Water Filtration System is the number 1 product in Vietnam, achieving export quality to ASEAN countries and the world with the best price compared to the same products in the market.
Viet An မှ တင်ပို့သော RO 300, 300 LPH VAIA300 ရေစစ်ကို နိုင်ငံတကာ စံချိန်ဖြစ်တဲ့ ISO 9001:2015 နဲ့ အညီ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းကို ဗီယက်နမ်မူပိုင်ခွင့်ရုံးမှ UA,USApec ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ် မူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉၊ ၂၅၀၉၇၀ တို့ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ပေးထားပါတယ်။ 300 LPH VAIA 300 ရေစစ်က ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ နံပါတ် ၁ ဖြစ်ပြီး အာဆီယံနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့သော ကွာလတီ ရရှိထားပါတယ်။
Why should we use the 300LPH VAIA300 Purified Water Filtration System of Viet An?
Viet An မှ 300LPH VAIA300 ရေစစ်စနစ်ကို ဘာကြောင့် အသုံးပြုသင့်တာလဲ
In the current trend of world economic integration, Vietnam is taking steps forward vigorously. Plants and factories “sprouted” like mushrooms after rain across the provinces and cities of the country. Accompanying that is the increasing amount of industrial wastewater discharged into the environment, making the source water seriously polluted, causingagreat impact on the health of the people.
ယနေ့လို ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ဗီယက်နမ်ကလည်း တိုးတက်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ စက်ရုံတွေကလည်း နိုင်ငံအနှံ့ မှိုတွေပေါက်သလို မြောက်မြားစွာ တည်ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရေဆိုးတေတွ စွန့်ပစ်ကြပြီး ရေအရင်းအမြစ်ကို ညစ်ညမ်းစေကာ လူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်လာစေပါတယ်။
Then the population growth dizzyingly, the widespread use of pesticides and the discharge into the environment is making our water sources fall into an alarming state of pollution.
ညစ်ညမ်းမှုတွေက ကြီးမားလာမယ်။ ပိုးသတ်ဆေးတွေနဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို ပတ်ဝန်းကျင်ကို စွန့်ပစ်တာက ရေအရင်းအမြစ်ကို ညစ်ညမ်းတဲ့ နေရာကြီးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နေသလိုပါပဲ။
ရေတွေက ညစ်ညမ်းလာတဲ့အခါ ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ?
Interested in protecting the health of people, Viet An Joint Stock Company has introduced the 300LPH VAIA300 Purified Water Filtration System using the most advanced RO water purification technology recently. Products are manufactured according to US technology and imported and distributed directly by Viet An in Vietnam and exported to ASEAN countries. VAIA300 system uses stainless steel autovan filter column with high durability, the quality of filtered water meets pure standards will surely make you feel satisfied.
လူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် Viet An မှ မကြာခင်သေးခင်ကပင် ခေတ်အမီဆုံး RO နည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့ 300LPH VAIA300 ရေစစ်ထုတ်စနစ်ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေကို US ရဲ့ နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး Viet An မှ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများသို့ တင်သွင်းဖြန့်ချီပါတယ်။ VAIA300 စနစ်က ကြာရှည်ခံတဲ့ စတိန်းလက်စ်စတီး အော်တိုဗန်ကို အသုံးပြုထားပြီး ရေစစ်တဲ့ ကွာလတီကို သင်ကျေနပ်မှာ အသေအချာပါပဲ။
Outstanding advantages of 300LPH VAIA300 Purified Water Filtration System of Viet An
Viet An ရဲ့ 300LPH VAIA300 ရေစစ်ကိရိယာ၏ ထူးချွန်သော ကောင်းကျိုးများ
The water purification process is completely self-contained and automatic, so the finished water hasapure purity that meets the Vietnamese standard QCVN 6-1:2010/BYT of the Ministry of Health on food hygiene and safety, and meets the international standard FDA of the US should be eligible for export to the ASEAN community.
ရေသန့်စင်ခြင်း လုပ်ငန်းက အော်တိုဖြစ်ပြီး စစ်ပြီးတဲ့ရေက လုံးဝသန့်စင်ပြီး ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ QCVN 6-1:2010/BYT စည်းမျဉ်းနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။ ထို့အပြင် အာဆီယံနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ရန် US ရဲ့ FDA လက်မှတ်လည်း ရရှိထားပါတယ်။
Production and assembly standards of the 300LPH VAIA300 Purified Water Filtration System always ensure ISO 9001:2015 standards
300LPH VAIA300 ရေစစ်ထုတ်စနစ်ရဲ့ ထုတ်လုပ်တပ်ဆင်မှုတွေက ISO 9001:2015 စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။
The system usesafilter column made of high quality 304 stainless steel material, highly durable, easy to clean and absolutely safe.
ဒီစနစ်က ကြာရှည်ခံပြီး သန့်ရှင်းရ လွယ်ကူကာ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ရေစစ်ကော်လမ်ကို သုံးထားပါတယ်။
Compact design makes it easy to transport and install
သိပ်သည်းတဲ့ ဒီဇိုင်းကြောင့် သယ်ယူပို့ဆောင် တပ်ဆင်ရ လွယ်ကူပါတယ်။
Apply the technology to save power to the maximum helps to savealot of electricity consumption costs
ပါဝါကို ချွေတာတဲ့ နည်းပညာ အသုံးပြုထားတာကြောင့် မီတာကြေး သက်သာပါတယ်။
The automatic valve system is capable of self-adjusting the filter column, self-cleaning the filter column to help the water filtration process take place completely automatically, saving the cost of hiring labor.
အော်တိုအဆို့စနစ်က ရေစစ်ကော်လမ်ကို ကိုယ်တိုင် ညှိနိုင်၊ သန့်ရှင်းနိုင်ပြီး ရေစစ်ထုတ်လုပ်ဆောင်ချက်ကို အော်တိုလုပ်ဆောင်နိုင်အောင် ကူညီပေးတာကြောင့် အလုပ်သမားစရိတ်ကို သက်သာစေပါတယ်။
Notes when installing 300LPH VAIA300 Purified Water Filtration System
300LPH VAIA300 ရေစစ်ကို တပ်ဆင်သည့်အခါ မှတ်ထားရမည်များ
This isaspecialized system to filter and treat water so before installation you need to choose which water source you intend to treat, well water or tap water ...
ဒီစက်က ရေစစ်ဖို့ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက် မတပ်ဆင်ခင် တွင်းရေ၊ ဘုံပိုင်ရေ စသဖြင့် ရေအရင်းအမြစ်ကို ရွေးချယ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
It is necessary to ensure that the source water flow through the system is like this, in order for the system to filter the capacity as originally announced.
ရေက စနစ်ကိုဖြတ်ပြီး မူလပြောပြထားတဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအတိုင်း စစ်ထုတ်နိုင်အောင် သေချာ ပြုလုပ်ရပါမယ်။
This is an electric filter system, so it is necessary to ensureastable power line system, which is 3-phase electricity for production and business. If the power source is weak, the water pressure is not enough, so it will decrease the filter capacity of the system. Not to mention that inadequate electricity, it will likely make the pump system worse and will shorten their life
ဒါက လျှပ်စစ် စစ်ထုတ်စနစ်ဖြစ်တာကြောင့် အဆင့် ၃ ဆင့် လျှပ်စစ်အားဖြစ်တဲ့ တည်ငြိမ်တဲ့ ပါဝါလိုင်းကို သေချာလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ပါဝါက အားနည်းပြီး ရေဖိအားက မလုံလောက်ရင် စစ်ထုတ်နိုင်တဲ့ စွမ်းအားလည်း လျော့သွားပါမယ်။ မလုံလောက်တဲ့ လျှပ်စစ်အားက ရေစုပ်စက်စနစ်ကို ပိုဆိုးအောင်လုပ်နိုင်ပြီး မြန်မြန် ပျက်စေနိုင်ပါတယ်။
Although it is designed in an compact industrial design, installation space is still required. Depending on the purpose, if you are only using purified water for your home use, there is no need to pay too much attention to this. However, if you both want to have purified water for your family and also want to produce and trade in bottled pure water, you need to prepareasite to install the filling machine system, the space for the bottle residue for production. This isamandatory requirement ofabusiness and production establishment if it wants to be licensed to operate in production. If you need design advice on premises of production and business establishments, Viet An is always ready to assist you.
သိပ်သည်းတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတယ်ဆိုပေမယ့် တပ်ဆင်ဖို့ နေရာကတော့ လိုအပ်နေပါသေးတယ်။ သင်က သင့်အိမ်သုံးအတွက်ပဲ တပ်တင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒါကို အာရုံစိုက်စရာ မလိုပါဘူး။ သို့သော်လည်း မိသားစုသုံးရော၊ ရေသန့်တွေ ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ရော ဆိုရင်တော့ လောင်းဖြည့်တဲ့ စနစ်အတွက် ဆိုက်နဲ့ ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ဘူးခွံတွေနေရာလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒါက မဖြစ်မနေ လုပ်ရမယ့်အရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း ဒီဇိုင်းအတွက် အကြံဥာဏ်လိုချင်ရင်တော့ Viet An မှ သင့်ကို ကူညီပေးမှာပါ။
Once you have decided to choose this VAIA300 Purified water filtration system, you can study to investasynthetic filling system made of stainless steel to fill 35-60 jars/h (20L jar) and 150 bottles/hour (500ml bottle) withacompetitive price from just ... USD.
2 Air disinfection lamp လေပိုးသတ်မီးအိမ် 1 unit VA/ USApec
3 Air disinfection lamp hanger လေပိုးသတ်မီးအိမ်ရုံ 1 unit VA/ USApec
14 20” PP Filter Cartridge ၂၀ စစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့် 1 unit VA/ USApec
15 20” Filter housing စက်ရုံသုံး စစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ် 1 unit VA/ USApec
18 RO membrane RO အလွှာပါး 1 unit Hitech-USA/CSM Korea
22 Solenoid valve သံလိုက်အစို 1 unit Cn Korea
Hỏi đáp & đánh giá 300LPH VAIA300 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်